LEGO Halloween set အသစ်များယခုရရှိပါပြီ
01 / 08 / 2021 30 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 313 Views စာ0မှတ်ချက် 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, ပထမဦးစွာမျှော်, ဟယ်လို, Lego, Lego ဟယ်လိုဝင်း, Lego ရာသီအလိုက်, Sets အသစ်များ, ဇီးကွက်, ရာသီဉတုလိုက်သော
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသစ်နှစ်ခု Lego ရာသီအလိုက်တိရိစ္ဆာန်များစုဆောင်းမှုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ရနိုင်သည်။
ယခုနှစ်ဟယ်လိုဝင်းသည်အနည်းငယ်နောက်ကျသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်အွန်လိုင်းစတိုးသည်ပုံစံသစ်နှစ်ခုရှိသည့်အတွက်၎င်းသည် spooks များ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်ရာသီများကျင်းပရန်အချိန်စောလွန်းသည်ဟုထင်ရသည်။
ဒီအိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့မျှော်လင့်သူတွေဟာ ၄၀၄၉၃ Spider & Haunted House Pack ကို ၄၀၄၉၃ သို့မျှော်ကြည့်နိုင်ပေမယ့်စုဆောင်းသူတွေပိုစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်။ 40497 ဟယ်လိုဝှေးရာသီအလိုက်အခြေခံသရုပ်ဖော်ထားသောလက်တွေ့ကျသောတိရိစ္ဆာန်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ အစုံပါဝင်သည် 40462 ချစ်သူများနေ့ရဲ့ဘရောင်းဝက်ဝံ, 40463 Easter Bunny နှင့်လာမည့် ခရစ်စမတ်ပင်ဂွင်း.
ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံပါ Lego သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင်စတင်မည့်ရာသီအလိုက်
A ပထမကြည့်ပါ at 40497 ဟယ်လိုဝှေး ယခင်တိရိစ္ဆာန်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုစီ၌တွေ့ရသောဝှက်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အောက်ခြေ၌သိုလှောင်ထားသောလင်းနို့အသေးစားတည်ဆောက်မှုနှင့်ဆက်လက်တည်ဆောက်နေသည်ကိုပြသည်။
ဝယ်ယူရန်စီစဉ်သူများ 40497 ဟယ်လိုဝှေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည် 40493 Spider & Haunted House Pack လိုက်ဖက်ညီသောလှပသောရာသီအလိုက်မော်ဒယ်များအတွက်ခြင်းတောင်းထဲသို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲက Check မာစတာစာရင်း of Lego အမေရိကန်၌နွေရာသီဖြန့်ချိမှုအသစ်များအတွက်ယနေ့စတင်သောတည်ဆောက်မှုအသစ်များအကြောင်းနှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ယနေ့အုတ်ပုံ - အမှောင်တော
Lego Star Wars ၇၅၃၁၂ Boba Fett ၏ Starship သည်လူကြိုက်များသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် →